Home » သတင်း » Mediaproxy BroadcastAsia ပြရန် 2019 မှာအကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်သည့်နှင့်အပြည့်အဝ OTT ပေးပို့စောင့်ကြည့်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ
Mediaproxy BroadcastAsia ပြရန် 2019 မှာအကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်သည့်နှင့်အပြည့်အဝ OTT ပေးပို့စောင့်ကြည့်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ
မျိုးစုံဘူတာနှင့်ပလေးအောက်ကိုစီး running network operator များမှ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြေရှင်းသောအ LogServer အခြား feature သစ်များအကြားတိုက်ရိုက် source ကိုနှိုင်းယှဉ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဤသည်ကို real-time အတွက်မတိုက်ဆိုင်အကြောင်းအရာသတ်မှတ်နှင့်ဗီဒီယိုပစ္စည်းသုံးပြီးတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတင်းရင်းမြစ်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါသည်။ မသမာမှုတွေ့ရှိလျှင်သတိပေးချက်တစ်ခုချက်ချင်းအော်ပရေတာမှစလှေတျတျောဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် LogServer အထောက်အကူ SMPTE ST 2110 မီဒီယာအိုင်ပီကို formats ကျော်နှင့် Newtek‘s NDI (Network Device Interface) technology. By working with both these sources, the software’s compliance recording and monitoring options are enhanced, ensuring complete adherence to standards at all points along the IP chain.
2001 ကတည်းကကမ္ဘာအဝှမ်းမှအင်ဂျင်နီယာများကရာပေါင်းများစွာ, 24 /7စောင့်ကြည့်မှု, analysis multiviewing နှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ရင်းမြစ်များမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးဘို့ Mediaproxy ရဲ့စုစည်း software ကိုဖြေရှင်းချက်အပေါ်နေ့စဉ်အားကိုး။ 4K, HEVC အပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံများနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအဘို့ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ SMPTE 2022-6, SMPTE 2110, NDI, HLS ဖွ, MPEG-Dash, RTMP နှင့်ဒီဗွီဘီ-2, Mediaproxy web browser ကိုနှင့်မိုဘိုင်း interfaces အသုံးပြုရလွယ်ကူမှတဆင့် On-ဝေဟင်ဖြစ်ရပ်, အကြောင်းအရာရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာစိစစ်အတည်ပြု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျစ်လစ်။ လက်ရှိထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် IP ကို ​​streaming များစည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ compliant, Mediaproxy အားလုံးကိုလက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းကို support စာတန်းထိုး, ဒီဗွီဘီစာတန်းထိုး, SCTE-35, SCTE-104 နှင့်အသံကျယ်။ မြေပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ, မိုဃ်းတိမ်, ထုတ်လွှင့်စောင့်ကြည့်မှု, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လိုက်နာမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
Quincy မီဒီယာကိုနောက်မျိုးဆက်လိုက်နာမှု၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး system အဖြစ် Mediaproxy LogServer တပ်ဆင်ပြီး - သြဂုတ်လ 14, 2019
Densitron နောက်ထပ် IBC 2019 မှာ Display ကိုအတွက်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Interface ကိုဖြေရှင်းနည်းကိုပို့ဆောငျတိုးချဲ့ခြင်း - ဇူလိုင်လ 31, 2019
IDS ပလက်ဖောင်း၏ Densitron ကြေညာချက်များသိမ်းယူမှု - ဇူလိုင်လ 17, 2019
ထုတ်လွှင့်လေးစားလိုက်နာခြင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ BroadcastAsia သရုပ်ဖော်စာတန်းများကို ip IP Penalty Boxes isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Log ABR Streams LogServer Mediaproxy Monitor ABR Streams OTT OTT စောင့်ကြည့် OTT Stream Metadata OTT Streams SCTE Triggers SMPTE ST 2110 ပို့ဆောင်ရေး Stream ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-04-23
ယခင်: အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ - စာချုပ်
နောက်တစ်ခု: အွန်လိုင်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ပှဲအခမျးလွှမီဒီယာထုတ်လုပ်သူ 25 စာရင်းမှ Named Magewell